News Collection: हिरोइनका आँखा चिन्न प्रतिस्पर्धा !
हिरोइनका आँखा चिन्न प्रतिस्पर्धा !
नेपाली सिनेमाका हिरोइनको आँखा कल्ले नचिन्ला ? त्यसमा पनि मादक, नशालु, लठ्ठ पार्ने हिरोइनका आँखा भनेपछि हुरुक्कै हुने दर्शकहरु त वग्रेल्ती छन् । सोही क्रममा एक्सनेपाली ब्लगले 'हिरोइनका आँखा चिन्नुस ५ सय जित्नुस' नारासहित आँखा चिन्ने प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । 'नेपाली सिनेमाका परिचित हिरोइनका आँखा चिन्न प्रतिस्पर्धा गराएका हौं' उक्त वेभसाइटले उद्देश्यबारे लेखेको छ 'यसले हाम्रा भिजिटरमा मनोरन्जन पैदा गर्ने विश्वास लिएका छौं ।'
धेरै भिजिटरले यसअघि अभिनेत्री अरुणिमा लम्सालको आँखा चिन्ने प्रयास गरे । रोचक कुरा त दोस्रो चरणमा कुनैपनि भिजिटरले हिरोइन रेजिना उप्रेतीको आँखा चिन्न सकेनन् । नशालु आँखा विशेषता भएकी रेजिनाका आँखालाई ठम्याउन भिजिटरलाई कठिन भयो । तेस्रो कन्टेन्सटमा अर्को एक आँखा राखिएको छ जसलाई चिने एकहजारसहित 'बन्दना' पुरस्कार दिइने ब्लगले जनाएको छ ।
व्रेनवास र बौद्धिक अभ्यासका लागि आयोजना गरिएको 'आइ कन्टेस्ट'लाई धेरैले रुचाएका छन् । कुनैपनि मानिसको पहिलो हेराइ आँखाबाटै सुरु हुन्छ तर धेरैलाई त्यही आँखाले झुक्याइदिने गरेको छ । यसरी दर्शक झुक्किनुमा हिरोइनहरुको आँखा लोभी भएर होकि दर्शकको मन पापी । जसलाई एक्सनेपाली ब्लगले उत्खनन गर्ने प्रयास गरेको छ ।